လူငယျတှေ မသိကွတော့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အလယျဗဟိုခကျြမ တညျနရော – Daily Feed MM
Admin_John | October 22, 2021 | Knowledge | No Comments
ဝမျးနညျးစရာကောငျးပါတယျ။ ယနေ့ ခတျေလူငယျတှဟော ဖုနျး ဂိမျးတှမှောသာ အခြိနျကုနျပွီး အမိ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သမိုငျးနဲ့ ထူးခွားမှုတှကေို မသိကွ စိတျမဝငျစားကွတော့ပါဘူး.
မွနျမာနိုငျငံ အလယျဗဟို ခကျြမတညျရှိရာ နရောသညျ မွနျမာနိုငျငံ အလယျပိုငျး၊မန်တလေးတိုငျး၊ ကြောကျဆညျခရိုငျ၊ မွဈသားမွို့နယျ၊ ကူမဲမွို့ မွ သု ခ ရှာ အနီးရှိ ပွက်ခရှတေောငျပျေါတှငျ တညျရှိသညျ။
ကမ်ဘာ့တညျ နရောပွ စနဈ (GPS) တိုငျးတာခကျြအရ မွောကျ လတ်တီတှဒျ ၂၁ ဒီဂရီ ၁၂.၆၉၅ မိနဈ၊ အရှေ့ လောငျဂြီတှဒျ ၉၆ ဒီဂရီ ၁၄.၇၅၉ မိနဈတှငျ တညျရှိသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ အလယျဗဟိုခကျြမ အ မှတျအသား ကြောကျတိုငျ တဈခုကို မွနျမာနိုငျငံ မွတေိုငျးအဖှဲ့မှ စိုကျထူထားသညျ။ပွက်ခရှေ့ တောငျပျေါရှိ ပွက်ခရှစေတေီတျော အနီးတှငျ တှနေို့ငျပါသညျ။ ပွက်ခရှေ့ တောငျသညျ ၃၇၅ဝ ပေ မွငျ့သညျ။
တောငျထိပျပျေါတှငျ အနျောရထာမငျးတညျထား ကိုးကှယျခဲ့သော သမိုငျးဝငျ ရှေးဟောငျးစတေီ တညျရှိသညျ။ပုဂံ အနျောရထာမငျးသညျ ဗုဒ်ဓမွတျစှာ စှယျတျော ပှားမြားကို ပုဂံ တနျ့ကွညျတောငျ၊ တူုရှငျးတောငျ၊
လောကနန်ဒာနှငျ့ ရှစေညျးခုံ စတေီတျော တို့တှငျ ဌာပနာထား တညျခဲ့ပွီး နောကျ ဆုံး ပဉ်စမမွောကျ စှယျတျောပှားကို မွဈသားမွို့ အရှတေ့ောငျဘကျ ပွက်ခရှေ့ တောငျ ပျေါ ရှိ၊ပွက်ခရှစေ့တေီတျောမှာ ဌာပနာ ထားခဲ့လသေညျ။ အနျောရထာ မငျးလကျထကျတှငျ ကြောကျ
ဆညျခရိုငျရှိ ပွက်ခရှတေောငျ၊ကယှတျတောငျတို့မှ ကသြောရကေို အထပျ ထပျစဈကာ ရသေောကျကနျပွုလုပျခဲ့ကွောငျး ၊သမိုငျးအထောကျ အထား မြား အရတှရှေိ့ရပသေညျ။ ထို စတေီကိုလညျး ပွက်ခရှေ့ မဟာစှယျတျောစတေီ ဟု ယနတေို့ငျ ချေါလသေညျ။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ ယနေ့ ခေတ်လူငယ်တွေဟာ ဖုန်း ဂိမ်းတွေမှာသာ အချိန်ကုန်ပြီး အမိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းနဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို မသိကြ စိတ်မဝင်စားကြတော့ပါဘူး.
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ဗဟို ချက်မတည်ရှိရာ နေရာသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ကူမဲမြို့ မြ သု ခ ရွာ အနီးရှိ ပြက္ခရွေတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့တည် နေရာပြ စနစ် (GPS) တိုင်းတာချက်အရ မြောက် လတ္တီတွဒ် ၂၁ ဒီဂရီ ၁၂.၆၉၅ မိနစ်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၄.၇၅၉ မိနစ်တွင် တည်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ဗဟိုချက်မ အ မှတ်အသား ကျောက်တိုင် တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းအဖွဲ့မှ စိုက်ထူထားသည်။ပြက္ခရွေ့ တောင်ပေါ်ရှိ ပြက္ခရွေစေတီတော် အနီးတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြက္ခရွေ့ တောင်သည် ၃၇၅ဝ ပေ မြင့်သည်။
တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် အနော်ရထာမင်းတည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့သော သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းစေတီ တည်ရှိသည်။ပုဂံ အနော်ရထာမင်းသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ စွယ်တော် ပွားများကို ပုဂံ တန့်ကြည်တောင်၊ တူုရွင်းတောင်၊
လောကနန္ဒာနှင့် ရွှေစည်းခုံ စေတီတော် တို့တွင် ဌာပနာထား တည်ခဲ့ပြီး နောက် ဆုံး ပဉ္စမမြောက် စွယ်တော်ပွားကို မြစ်သားမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ပြက္ခရွေ့ တောင် ပေါ် ရှိ၊ပြက္ခရွေ့စေတီတော်မှာ ဌာပနာ ထားခဲ့လေသည်။ အနော်ရထာ မင်းလက်ထက်တွင် ကျောက်
ဆည်ခရိုင်ရှိ ပြက္ခရွေတောင်၊ကယွတ်တောင်တို့မှ ကျသောရေကို အထပ် ထပ်စစ်ကာ ရေသောက်ကန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊သမိုင်းအထောက် အထား များ အရတွေ့ရှိရပေသည်။ ထို စေတီကိုလည်း ပြက္ခရွေ့ မဟာစွယ်တော်စေတီ ဟု ယနေ့တိုင် ခေါ်လေသည်။